Si Xun Wax U Sheeg Sixir Ka Daran e, Yaa Hablaheenna Caayey? | HAYAAN NEWS
Si Xun Wax U Sheeg Sixir Ka Daran e, Yaa Hablaheenna Caayey?
Waxa uu ahaa Waliid Binu Muqbah, oo loo diray reer Mustalaq, intuba waxa ay ahaayeen kuwo xaqa Alle ku sugan. Waliid se waxa uu keenay xog aan oollin reer Mustalaq, xogtaa xaqiiqda la weydaariyey waxa ay sababi gaadhay in dhibaato bani’aadannimo dhacdo. Kaddib markii warka xaqiiqdiisu soo baxday, waxa Alle uu soo dejiyey aayadda ku jirta Suuratul Xujuraat (aayadda 6) oo sheegaysa in warka la iska hubiyo inta aadan gabboodfal geysan. Intaasi waxa ay dabar iigu noqotay mar aan aad u kacay, oo war aan ka helay Maxamed Beddal, kaas oo sheegaya qayb nolashaydu ka soo unkantay in meel looga dhacay. Waxa aan ku qasbanaaday in arrinkan aanan si dhayal ah u qaadan balse aan baadho, xaqiiqdiisana aan soo helo, taas oo go’aan u qaadasho uga dhigay taladayda.
Buugga oo aan ku ogaa maktabaddayda guriga, ayaa nasiib darro waayey, se raadin kaddib waxa uu soo galay gacantayda, aniga oo qof kale ka soo ergistay, waxa aan markiiba maansada uu Beddal soo qaadanayo ka halacsaday bogga 94, waxa u hordhac ah, ‘Sida kor ku xusan, in gabayga cay iyo aflagaaddo loo adeegsadaa, dhaqanka Soomaalida way reebbanayd. Gabayada cayda ah ee raggii tiriyey gabayaannimadii lagaga saaray waxa ka mid ah kan hoos oo la yidhi waxa tiriyey nin la odhanjirey X. Guuleed (Dhoolla-yare), Kaddib qoraagu waxa uu keenayaa gabayga.
Kaana waxa ka horreeyey mid kale oo cutubka ciwaankiisu yahay Cayda’ ka soo bilaabmaya, kaas oo isna ninkii tiriyey gabayaannimada laga saaray, ninkaas oo loo garanayey Cabdillaahi Muuse Cabdille Jiciir (bogga 92). Qoraagu muxuu uga jeeday tallow? Isla hordhaca cutubka aynnu kor ku xusnay ayaa uu kaga jawaabay, waxa uu yidhi, “Diinta Islaamka ka sokow, dhaqanka Soomaalidu cayda ma oggala. Cayda waayeelka iyo haweenka ee aan lafajabka ahaynna xaal aa layska qaadi jiray, haddii laysku helo.
Haweenka in la caayo oo gabayo lafajab ah loo tirshaana dhegxumo weyn ayey ahayd. Haddaba Maxamed Cabdalle Xasan kuwuu tiriyey mooyaane inta aan ka warqabo, waxa la hayaa gabaygan hoos ku qoran wax lafajab ah oo haweeney loo ririyo, waxaana tiriyey ninka la odhan jiray Cabdillaahi Muuse.”
Qof kasta waxa u soo baxaya qoraalku sida uu u yaal ee ah, rag sidaa u aflagaaddeeyey haween in laga xidhay gabayaannimadii, se ay is weyddiintu ay tahay maxaa Sayidka tiisa musallam looga dhigay, ama ka dhigay. Iyada oo sidaa u cad, bal toos u tag bogga 106, waxa uu leeyahay, “ Guntii iyo gebagebadii, akhristoow, in Cabdillaahi Muuse Cabdille Jiciir, X. Guuleed Dhoollayre iyo Ismaaciil Mire sharaftii iyo gabayaannimadii lagaga xayuubiyo aflagaaddadii ay maansooyin kooda u adeegsadeen, Ina Cabdalle Xasanna la yidhaa waa geesi waddaniya miyaanay gef iyo eex ahayn?.
Waliba waxa xusan, Ismaaciil Mire gabaygii hadalka lagaga helay ee uu Salaan Carrabey u tiriyey (bogga 94), waxa intaa sii dheer aayadda afaraad ee suuradda Alnuur oo ka hadlaysa xeerka u yaal kuwa qadafka ku sameeya dumarka dhowrsoon, (Bogga 96). Intaas oo dhan, waxa soo baxaysa eedda uu Sayidku lahaa, taas oo si badheedh ah uga galay haweenka (bogga 95), gabaygaas oo qoraagu waa Guribarwaaqo e, ka soo xiganayo diiwaannada Aw Jaamac Cumar Ciise, Taariikhda Daraawiishta iyo Sayid Maxamed Cabdalla Xasan (bogga 4,5), iyo Yaasiin Cismaan Keenaddiid, (Ina Cabdille Xasan Ela Sue attivita lettataria , (bogga 245). Gabaygan tixraacyada leh, waa ka uu beeninayo Maxamed Beddel in uu Sayidku leeyahay.
Haddaba maxaa kuu soo baxaya? Intaas marka aad isla hesho, waa in warka dhiillada leh ee Beddal inaga soo gaadhsiiyey Guribarwaaqo ayna waxba ka jirin, ahaynna war la qaadan karo, oo ah in wasiirku uu caarkeenna uu caayey. Waana waxa ay muhiimka u tahay in warka la iska hubsado. Arrinka kale ee walaalka hoosmaray ayaa marka koobaad ah, in hadalka dabada go’an uu micnaha iyo ujeeddada hadalka iyo fahanka uu lumìyo, taasna waa midda uu ku dhacay, innagana uu inagu riday, waa marka labaad e, Beddal buugga waayihii uu soo maray in uuna laba socon ayuu muujiyey, buuggana dood hore oo qoraalleed ah ayaa rag waaweyn oo qoraayo, aqoonyahanno iyo siyaasiyiin leh ka galeen.
Waxa aan is weyddiiyey, Guribarwaaqo, ma Cabdiraxmaankii aad garanaysay ee odeyga ahaa, waayeelka ahaa ayuuna ahayn, mise mid odeyga xagxaganaya ayaa jira?. Qoraalka buugga markaan dib u raacay, waanad ila arki kartaan e, odeygu waa waayeelkii aynnu ogeyn.
Qofku haddii dhinac ka mid ah qof uu qiimaynayo, kuma qasbana in uu dhankiisa kale sheego, taasna ma noqoto ceebayn, waana midda uu Beddel wax weyn oo ceeb ah inooga dhigayo, waana midda kale’e, buug waxa lagu buriyaa buug, inta uu Ismaaciil Cumar Geelle iyo Cabdi Maxamuud Cumar oo midna waxba ka khusayn u qaylo-doon diranayo, waxa uga habboonayd in uu qalinka uu qaato. Waxa kale oo iyana muuqatay hadalka in ay keentay wasaaraddii uu agaasime waaxeedka uu ka ahaa Beddal in la hoos geeyey wasiir Guribarwaaqo oo uu hore ugu qaniinsanaa dano barennimo.
Maxaa inaga inala gudboon? War kasta oo la inagu soo tuuro, kaas oo awrka la rabo in la inagu kacsado in aynnu iska hubinno, hubinta warkuna waa xil qof kasta oo war loo keenay saaran. Beddal na waxa la gudboon, waxa uu inoo sheegayo in uu inaga soo baandheeyo, sharaftiisa iyo qofka uu durayo midna uuna meel kaga dhicin, laga samaynna war aan jirin.
Xuseen Xasan Xuseen